Homeसमाचारछोराको हात कु’हिएर झर्न लागिसक्यो, उप-चार गर्ने पैसा छैन, छोरो पिठ्युँमा बोकेर च’न्दा माग्दै (भिडियो सहित)
November 27, 2021 admin समाचार 1243
यी नि’र्दोष बालकले आखिर कुन पापको स’जा’य भो’ग्दै’छ्न, कापीकलम समाउने उनको हात सु’न्निएर कु’हिएर झर्ने तरखरमा छ । आर्थिक अबस्था एकदमै क’मजोर छ, डाक्टरले हात का’ट्’नुपर्छ भन्दा अस्पतालमा बुझाउने पैसा नभएर दुखाइ अनि पी’डा खेप्दै हिड्दैछ्न यी बालक ।
गुल्मी जिल्लाको इस्मा नगरपालिका वडा नम्बर ६ सिमपानी नाम गरेको ठाउमा घर भइ बस्दै आएकि देश`कुमारी कुमाल नाम गरेकी एक महिलाका राम`बहादुर कुमाल नाम गरेका छोरा साथिसग खेल्दै गर्दा बिजुलिको पोलमा चढेछ्न र एक्कासि उनी त्यहा`बाट क’रेन्ट लागेर ल’डे’का रहेछ्न ।
आमा भने मेलामा रहिछिन, हत्त न पत्त अस्पताल त लगिन आमाचाहिले तर कहि बेडको स’मस्या, कहि उपचा`र नै नहुने भनेपछि उनले भैरहवा पुर्याइछिन छोरालाइ ।
एउटा ग्लुकोज मात्र चढाएको अरु उपचार केही`पनि नगरेको तर पैसा भने १६ हजार लिएको भन्दै गु’ना’सो गर्छिन उनी । पैसा सबै ऋ’ण काढेर लगेकी रहि`छिन उनले । यत्तिका पैसा खर्च गरेर पनि के पाइन उनले, छोराको हात कु’हिन आटिसक्यो,
उपचार गर्नको लागि पैसा चाहिने, निकै नै ठुलो स’मस्यामा छिन उनी । पिठ्युँमा बि’रामी छोरो बोकेर च’न्दा उठाउदै हिड्दैछिन उनी, क’ठै ब’रा ! उनको अबस्था देखेर कसको चाहि मन न’दुख्ला र । बै’रिलाइ पनि यस्तो दु’ख नदिउन भगवानले ।
बिचरा बाबुको घाउको अबस्था एकदमै ना’जुक हेर्नै नसक्ने अबस्थामा रहेको छ । हात पुरै सुन्निएको अनि कु’हि’न लागेको अबस्थामा छ, प’रपरै ग’न्हा’उन थालेको छ उनको पाकेको घा’उ ।
अस्पतालले पहिला धरौटी झुन्ड्याउनुपर्छ भनेपछी उनी दि|नरात पनि नभनी च’न्दा बटुल्दै हिड्दैछिन । २ ३ लाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ धरौटी रकम । अस्प`तालले हात का’ट्’नुपर्ने बताएको छ र तुरुन्त पैसा चाहिने भएपछि उनिहरु के गर्नु न के गर्नुको अबस्थामा छन ।
दिनभरी काम गरेर बेलुकी खाने उनको आर्थिक अबस्था एकदमै कम’जो’र रहेको छ, पेट पाल्न मुश्किल परिरहेको अबस्थामा आखिर के आइलाग्यो उनिमाथी यो ? पेट पनि दु’लो परेको तर अहिले भने मलहम लगाएपछि टालिएको बताउछिन उनी ।
क’ठै ब’रा आफुले ना’ङ्गो तार समाएको र त्यसपछी के भयो केही थाहा नभएको बताउछ्न यि बाबू । भगवानरुपि सहयोगी मन भएका केही मान्छेहरुलाइ उनलाइ तिस हजार रुपैया सह|योग पनि गरेका छ्न ।
April 20, 2021 admin समाचार 3637
January 28, 2021 admin समाचार 5065
November 7, 2020 admin समाचार 8064